DOWNLOAD KOMODO ANTIVIRUS NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
MultiRes bụ uru nke na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ntọala nyochaa dịka mkpebi, ncha ụcha na ntanye ume. Nkwado asụsụ Russian na menu na-enye gị ohere ijikwa ngwanrọ a.
Usoro ihe omume ahụ enweghi njikwa eserese; kama, mgbe ị pịrị na akara ngosi ahụ, menu na-apụta. Ọ na-egosipụta ụkpụrụ nke mkpebi na chromaticity, yana hertz, nke na-agbanwe na taabụ kwekọrọ. Lee ị nwere ike ịpụ ngwa ahụ na bọtịnụ ahụ "Mechie".
Gbanwee mkpebi na ibe
Njirimara ndị a na-ejikọta na ngalaba abụọ: nke mbụ nwere ụkpụrụ na atụmatụ 16-bit, nke abụọ gosiri akụkụ ndị na-egosi 32 ibe.
Họrọ ugboro emelite
Ị nwere ike ịhọrọ otu hertzka na mpaghara nke atọ nke ndepụta egosipụta. Usoro a ga-egosiputa ụkpụrụ niile ọ bụla a ga-akwado gị.
Pịa bọtịnụ ahụ "Njirimara ngosi", ị ga-agafere ntọala ihuenyo gị, nke ga-apụta na ngwa Windows OS bara uru.
Ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma gbasara ngwanrọ software ma gbanwee ụfọdụ n'ime ya na ngalaba "Banyere MultiRes". N'okpuru ala nke windo dị iche nke meghere mgbe a clicyere ya, a ga-ahụ ntọala ahụ. N'etiti ha, ị nwere ike ịhọrọ itinye aka ngwa ngwa mgbe Windows malitere, họrọ nhọrọ iji gosi mgbanwe ndị ahụ ma kpebie ụdị ejiji ahụ.
Iji software a bara uru maka ndị na-agbanwe agbanwe ihe niile nke ngosi. Ngwunye nke components dị mkpa na-enye gị ohere iji gbanwee mkpebi na oge nke imelite ihuenyo ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Download MultiRes maka n'efu
Usoro mmemme ihuenyo Carroll Mkpebi mgbanwe na HotKey gbanwere Igwe ọkụ HDD
MultiRes bụ ihe ngwọta na-enweghị ntinye eserese nke na-enye gị ohere ịgbanwe mgbanwe nke ihe nyocha ahụ, yana ihe ndị ọzọ.
Onye Mmepụta: EnTech Taiwan